Inqubomgomo Yemfihlo - IntoKildare
Umthetho wekhukhi udinga amawebhusayithi ukuthi athole imvume kubavakashi ukugcina noma ukuthola noma yiluphi ulwazi kukhompyutha noma kudivayisi ephathekayo. Umthetho wamakhukhi usiza ukuvikela ubumfihlo be-inthanethi, ngokuvumela amakhasimende ukuthi azi ukuthi ulwazi olumayelana nabo luqoqwa futhi lusetshenziswe kanjani online. Amakhasimende angakhetha ukuvumela amakhukhi noma cha.
Le webhusayithi ihambisana noMthetho wamakhukhi ngokubonisa okuvelayo okuxwayisa ngamakhukhi. Ngokuchofoza 'Ngiyitholile!' uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi kuleli sayithi. Ungashintsha izimvume zekhukhi nganoma yisiphi isikhathi ngokuya kuzilungiselelo zakho zesiphequluli. Uma ukhetha ukucisha amakhukhi, eminye imisebenzi yewebhusayithi kungenzeka ingasebenzi kahle.
Imininingwane Collection & Sebenzisa
Amalogi wesistimu yethu futhi aqopha ikheli lakho le-IP, izinsuku nezikhathi zokuvakashelwa kwesayithi, amakhasi avakashelwe, uhlobo lwesiphequluli nemininingwane yamakhukhi. Le datha isetshenziselwa kuphela ukukala inani lezivakashi eziya kusayithi futhi ngeke isetshenziselwe ukukukhomba.
Izivakashi zinganquma ukuthumela i-imeyili ngesayithi lapho kungafakwa khona imininingwane ekhomba umuntu uqobo. Imininingwane enjalo isetshenziselwa ukunika impendulo efanelekile.
Imininingwane ekhonjwa umuntu iqoqwa ngefomu lokuxhumana elisheshayo. Sizosebenzisa lolu lwazi ukuphendula isicelo sakho nokuxhumana nawe mayelana nezinsizakalo zethu uma lokhu kusebenza.
Yonke imininingwane yamakhasimende efana negama, ikheli kanye nemininingwane ye-imeyili iyaqoqwa ngenhloso yokucubungula ama-oda futhi ngeke nakanjani ikhishwe emithonjeni yomuntu wesithathu.
Ukuxhumana ne-KingKildare.ie mayelana namaKhukhi
Ukugcina ubumfihlo bemininingwane yakho kubaluleke kakhulu kithi. Uma unemibuzo noma okukhathazayo ngemikhuba yethu yobumfihlo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
IKildare Fáilte, 7th Floor, Aras Chill Dara, Devoy Park, Naas, Co Kildare